ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးတလံုး ရှိယံုနဲ့ ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွကိုပါ ေရးသားနိုင် ဖတ်ရှုနိုင်မယ်လို့ ေြပာတာလား ? - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးတလံုး ရှိယံုနဲ့ ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွကိုပါ ေရးသားနိုင် ဖတ်ရှုနိုင်မယ်လို့ ေြပာတာလား ?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးတလံုး ရှိယံုနဲ့ ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွကိုပါ ေရးသားနိုင် ဖတ်ရှုနိုင်​မယ်​လို့​ ​သိ​ရ​ပါ​တယ်​။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးတလံုး ရှိယံုနဲ့ ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွကိုပါ ေရးသားနိုင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာမှ ယူနီကုဒ် စာလံုးဆိုတဲ့ ြပည့်ဝတဲ့ ဖန်တီးမှုတခု ြဖစ်လာမှာပါ။ ယူနီကုဒ် စာလံုးများ ဆိုတာ မည်သည့် ယူနီကုဒ် စာလံုးတလံုး ရှိယံုမျှြဖင့် မည်သည့် ဘာသာစကားကို မဆို လွယ်လင့်တကူ ဖတ်ရှုေရးသား နိုင်ေအာင်ဆိုြပီး စံ သတ်မှတ်ချက် အြဖစ်နဲ့ ယူနီကုဒ် စံ ဆိုြပီး ေရးသားခဲ့တာပါ။ ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးေတွမှာ အဲ့တာေတွ အတွက် ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယမ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယူနီကုဒ် ၅.၂ ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းမှာပါတဲ့ ြမန်မာစာ၊ တိုင်းရင်းသား စာေတွအတိုင်း ြပင်ဆင် ေပးထားပါတယ်။ လက်တေလာ အေနနဲ့ တိုင်းရင်သား စာေပေတွ အားလံုး အတွက် မေရးသား နိုင်ေသးမယ့် ၅၀% ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ် စာလံုးဆိုတာ လူမျိုးတမျိုး၊ စာေပ တခုအတွက် ဖန်တီးေပး နိုင်ယံုမျှနဲ့ ြပည်စံုတယ်လို့ မဆိုလို ပါဖူး။ ြမန်မာ ယူနီကုဒ် ဆိုတာနဲ့ ြမန်မာ ယူနီကုဒ်အတွက် ေပးထားတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗားရှင်းအလိုက် အချက်အလက်ေတွ အားလံုး ပါဝင်မှသာ ြပည်စံုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမည့်သည့် ြမန်မာ ယူနီကုဒ် စာလံုးကမျှ ြမန်မာ တိုင်းရင်းသား စာေပေတွအတွက် ထည့်သွင်း ေပးထားတာ၊ ေရးသား ဖတ်ရှုနိုင်ေအာင် စွမ်းေဆာင် ေပးေနတဲ့ သူေတွ မရှိသေလာက် ပါဘဲ။ အဲဒီလို လိုအပ်ချက်ေတွ အားလံုးအတွက် ဧရာြမန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ဟာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ေတွ အားလံုးနဲ့ ေသြခာ တိုင်ပင် လုပ်ေဆာင်ေနပါတယ်။